January 2018 – BFI Education Services Co., Ltd.
Spelling Bee Contest 2017-2018
The Spelling Bee is an annual contest organized by Bahan International Science Academy (BISA) since 2008. The purpose of this contest is to help students improve their spelling, increase their vocabulary, learn concepts, and develop correct English usage that will help them throughout their lives. We are excited to host the Annual Spelling Bee contest...
January 13, 2018July 31, 2018by admin
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Mathemania သချာင်္ဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲကြီး၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အထွေထွေ အချက်အလက်များ ၁) Mathemania သချာင်္ဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲ သည် BFI Education Services မှကြီးမှူးပြီး Shu Khinn Thar International College တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် ကျောင်းပေါင်းစုံ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤြ့ပိုင်ပွဲတွင် အဆင့်(၃)ဆင့်ရှိပြီးအဆင့်(level)အလိုက်ဥာဏ်စမ်းပုစ္ဆာအမျိုးမျိုးပါဝင်ပါသည်။ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သောစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်နှင့်သချာင်္ဘာသာရပ်အားစိတ်အားထက်သန်မှုမြင့်တက်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဤပြိုင်ပွဲအားကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂) မည်သူများဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ပြိုင်ပွဲဝင်အဆင့်အား အသက် (မွေးသက္ကရာဇ်) အလိုက်ဟူ၍ သတ်မှတ်ပြီးထိုအဆင့်များတွင် အကျုံးဝင်သူတိုင်း မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့်များမှ မည်သူမဆို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင် ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲအဆင့်များခွဲခြားမှုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲအဆင့် မွေးသက္ကရာဇ် မူလတန်းအဆင့် ၁ ရက် ဇွန်လ ၂၀၀၆ခုနှစ်...
January 13, 2018July 13, 2018by admin
International Food Festival on 15th December, 2017
There was an International Food Festival on 15th December, 2017 at Shu Khinn Thar International College. As you can see the photos posted here it was quitealively occasion. Some students and teachers had the traditional costumes on, and they prepared lovely dishes to sell to everyone. There were many countries such as Myanmar,...
January 10, 2018August 2, 2018by admin